Chii chinonzi Synthroid uye chinoshandiswei? - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Nharaunda, Wellness Checkout Zvinodhaka Info Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Zvipfuwo Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda Nhau Dzidzo Yehutano Hutano Dzidzo, Nhau Nhau, Wellness Nharaunda, Kambani Info Info, Nhau Kambani, Nhau
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Chii chinonzi Synthroid uye chinoshandiswei?
Chii chinonzi Synthroid uye chinoshandiswei?
Kana iwe uchinzwa kuneta kutenderera nguva, uine ganda rakaomarara nguva dzose, kana kucherechedza kuti kumeso kwako kuri kuzvitutumadza, iwe unogona kuve uine hypothyroidism , mamiriro ezvinhu apo chirwere chako chetachiona hachibudisi zvakakwana utachiona hwehomoni. Tsamba yeSynthroid inogona kubatsira.
Synthroid ndeye FDA-inogamuchirwa mushonga wehutachiona uyo kazhinji inobata hypothyroidism uye inodzora utachiona mahormone mazinga.
Chii chinonzi Synthroid?
Synthroid ( levothyroxine sodium ) rudzi rwemushonga wehutachiona unotsiva iyo mahormone yakasikwa inogadzirwa nehutachiona uye inobatsira kugadzirisa simba remuviri uye metabolism. AbbVie inogadzira iyi hormone mishonga. Inonyanya kubata hypothyroidism, asi inogona zvakare kurapa yakawedzera thyroid gland kana kenza yehutachiona mune dzimwe nguva.
Kana zvikaita kuti utachiona husashanda zvakanaka, muviri hauna thyroxine yakakwana-iyo hormone yekutanga inogadzirwa uye kuburitswa neiyo gland yegland. Thyroxine inoita basa rakakosha mukugaya, kukura kwehuropi, uye nemoyo uye mhasuru basa. Chinhu chikuru muSynthroid, levothyroxine sodium, chinoshanda zvakafanana ne thyroxine (inozivikanwawo seT4), ichibvumira muviri kuti ushande zvakanaka.
Levothyroxine sodium inogadzirwa nefomu ye thyroxine. Icho chinhu chinoshanda muSynthroid, iyo zita rezita vhezheni ye levothyroxine. Zvishandiso zvisina basa muSynthroid zvinowedzera kutora, chengetedza mushonga, uye wedzera ruvara.
Synthroid mushonga wekunyorerwa uye haugone kutengwa pamusoro pekambani. Taura nemupi wako wezvehutano kuti uone kana mushonga wacho wakanakira iwe.
Chii chinonzi Synthroid chinoshandiswa?
Synthroid inoshandiswa kurapa hypothyroidism, iyo mamiriro apo muviri unoburitsa yakaderera huwandu hwetachiona hormone. Iyo inogona zvakare kubata uye kudzivirira goiters inokonzerwa ne hypothyroidism. Goiter igland yakasimudzwa gland inogona kuitika nekuda kwekusaenzana kwehomoni, kushomeka kweiodini, kuvhiyiwa kwetachiona, kana mamwe mamiriro ezvinhu.
Usashandise Synthroid kurapa kusava nekenza kukura, zvenguva pfupi zviitiko zvehypothyroidism, kana kuwedzera utachiona muvarwere vane zvakajairika ayodini mazinga.
maitiro ekuderedza kukwirira kweropa ipapo ipapo
Brand-zita Synthroid rinowanikwa sehwendefa mu 12 masimba akasiyana . Taura nemupi wako wezvehutano nezve iyo dosing sarudzo yakakunakira iwe. Iyo yekutanga dosi inogona kusiyana sezvo nguva ichienderera sezvo utachiona hwehormone mazinga angangochinja nekufamba kwenguva.
Synthroid piritsi chiratidzo
Ruvara rwepiritsi Simba
orenji 25 mcg
chena 50 mcg
Violet 75 mcg
Olive 88 mcg
Yero 100 mcg
Rose 112 mcg
bhurawuni 125 mcg
Turquoise 137 mcg
Bhuruu 150 mcg
Lilac 175 mcg
Pink 200 mcg
Girinhi 300 mcg
Shanduro dzeGeneric yeSynthroid inouya mumacapsule, mhinduro dzemumuromo, uye mapoda ejekiseni. Macapsule anotangira kubva pa13 kusvika pa150 mcg, mhinduro yemumuromo iri pakati pe12 kusvika 200 mcg / mL, uye hupfu hunowanikwa mu100, 200, uye 500 mcg pavha.
Aya ndiwo masimba anowanikwa uye mafomu eSynthroid yevakuru. Kana iwe uri mugari mukuru, kana uine mwana anoda kutora Synthroid, taura nemupi wako wezvehutano nezveyero yakanakisa. Usati watanga mushonga, chiremba wako achadaro edza yako TSH (thyroid-inosimudzira mahormone) mazinga ekuti uone chiyero chakakodzera.
Synthroid inofanira kutorwa rini?
Kuti Synthroid ibudirire, inofanira kutorwa panguva imwechete mazuva ese, uchitevera matanho aya :
Tora Synthroid kamwe chete pazuva usati wadya.
Ita shuwa kuti iwe unotora Synthroid nemvura chete uye pane isina chinhu mudumbu.
Mirira maminitsi makumi matatu kusvika paawa usati wadya kana kunwa.
Iko hakuna mitezo kune vanogona kushandisa Synthroid-vakuru, vana, uye vakwegura vese vanogona kutora mushonga. Vana vanogona kutora mushonga kana hwendefa rakapwanywa uye rikasanganiswa neiyi kana maviri mashupuni emvura.
Usati watanga kutora Synthroid, taura nemupi wako wezvehutano nezve nhoroondo yako yekurapa, kusanganisira mamiriro ekurapa uye chero mushonga wauri kutora izvozvi. Kana iwe uri kutora mimwe mishonga uchitora Synthroid, muyero wako weSynthroid kana imwe mishonga ingangoda kuchinja.
Synthroid inogona kunge iine kudyidzana nemishonga inotevera:
Antacids, senge Maalox, Mylanta, kana Pepcid Yakazara
Mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri
Calcium carbonates, senge Tums uye Alka-Mints
Dumbu asidhi inodzora, senge Prilosec, Prevacid, uye Zegerid
Kana iwe uri kutora chero eaya madhiragi, taura kune wako mupi wehutano, sezvo ivo vangangoda kuti iwe umire kutora mumwe wemishonga iyi kana kuchinja nzira yaunotora yako mishonga. Iri harisi runyorwa ruzere rwekubatana kweSynthroid. Goverana zvese zvinowedzera uye zvirevo zvaunotora nachiremba wako kana wemishonga.
Udza mupi wako wezvehutano kana iwe:
Tora uremu-kurasikirwa nemishonga
Iva asina kunzwisiswa adrenal matambudziko
Tora iron, calcium supplements, kana maantacid
Une pamuviri kana kuyamwisa
Iva nechirwere chemwoyo kana chirwere cheshuga
Ziva kugwamba kweropa kana kuve nepituitary gland mamiriro
Iva neakaderera mapfupa emamineral density huwandu
Uyezve, zvimwe zvekudya zvinokanganisa kushanda kweSynthroid. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira:
Chikafu chine soy, furawa yesoya, kana chikafu checottonseed
Mushonga wevacheche une soya
Zvaunotarisira kana uchishandisa Synthroid
Vamwe vanhu vanogona kunzwa zvirinani mukati memazuva mashoma ekutanga Synthroid, asi zvinogona kutora mwedzi mahormone ako asati adzokera pane zvakajairwa. Kazhinji, Synthroid inotanga kugadzirisa zviratidzo mukati memavhiki maviri ekutanga mushonga. Pakati pevhiki nhanhatu mucherechedzo ndipo apo mutapi wezvehutano anoedza TSH mazinga zvakare, ongorora utachiona basa, uye gadziridza diki dosi rako kuti uve nechokwadi chekuti hutachiona hwehomoni yako hwakarurama.
Kubudirira kweSynthroid kunogona kushandurwa zvichienderana neshanduko muhuwandu hwehomoni hutachiona hunogadzirwa nemuviri wako, saka mupi wako wezvehutano anofanirwa kugadzirisa zviyero zvinodiwa. Zviitiko zvakakura zvehupenyu, sekuzvitakura, kuenda kumwedzi, kana kuchembera zvinogona kukanganisa ako mahormone emahormone. Kunyangwe kana zviratidzo zvetachiona zvikapera, usamire kutora Synthroid kana kuchinja nzira yaunotora usina kutanga wataura nachiremba.
Ongorora: Kana iwe ukatora utachiona kutsiva zvinodhaka, ungatofanira kuatora kweupenyu hwese.
Ndeipi mhedzisiro yeSynthroid?
Iwo makuru mhedzisiro anosanganisira kurwadziwa nemusoro kana kuchenesa, sekureva kwenyanzvi yehutachiona Brittany Henderson, MD, ECNU, anotungamira munyori we Zvaunofanira Kuziva Nezve Hashimoto's Chirwere . Vamwe varwere vane hanya nemadhayi uye mafirita mumushonga. Kana munhu akasangana nezviratidzo izvi, zvingave zvakanaka kuchinjira kune imwe mishonga yetachiona.
Heano mamwe acho mimwe mhedzisiro inokonzerwa neSynthroid:
Shanduko mukuda kana uremu
Zvimwe zvakakomba mhedzisiro zvinokanganisa kurova kwemoyo zvisina kujairika, kurova kwehana, kurova kwemoyo zvisina kujairika, kukundikana kwemwoyo, kuwedzerwa kweropa, kurwadziwa pachipfuva, kudedera, kufema kwekufema kana kunetseka kufema, kurwadza kwemakumbo, kurutsa, manyoka, fivha, shanduko munguva yekuenda kumwedzi, mikoko, kuputika kweganda, kana kusagadzikana. Kana iwe ukawana chimwe kana zvimwe zvezviratidzo izvi, tsvaga zano rekurapa ipapo ipapo.
Rondedzero iri pamusoro haisi rondedzero yakakwana yemhedzisiro. Taura nemupi wako wezvehutano nezve zvimwe zvinokanganisa, kudyidzana kwezvinodhaka, uye neruzivo rwezvinodhaka.
Yakareba-nguva, Synthroid inofanira kugadzirisa yako mahormone emahormone uye kugadzirisa metabolism yako.
Inogona here Synthroid kukubatsira iwe kurasikirwa uremu?
Kunyangwe Synthroid ichimisikidza kugadzirwa kwako kwehormone uye yako metabolism, haisi yekuremerwa-kurasikirwa nemushonga. Kurema kwako kunofanirwa kugadzikana paunenge uri pamushonga, uye haufanirwe kunge uri kuwana kana kurasikirwa nehuremu hwakawandisa.
Pane zvimwe zvinotsiva Synthroid here?
Sekureva kwenyanzvi yehutachiona Dr. Henderson, kune yakawanda utachiona mafomu.
maitiro ekuti uti uende nekukurumidza
T4-chete mafomu anosanganisira Synthroid; levothyroxine (iyo generic yeSynthroid); Levoxyl; Unithroid; Tirosint; uye Tirosint-SOL (iyo mhinduro fomu yeT4). Cytomel (kana liothyronine) mafomu eT3 (kana anoshanda utachiona kemikari), uye mimwe mishonga dzimwe nguva inowedzerwa kuna T4, anodaro Dr. Henderson.
Natural yakasarudzika thyroid (kana NDT) zvakare sarudzo. NDT inguruve yeguruzi mune fomu fomu uye inosanganisira zvese T4 uye T3. Sarudzo dzinosanganisira NP Thyroid; Armor; Zvisikwa-Throid; uye WP Thyroid. Pamusoro pezvo, varwere vanogona kuwana mishonga T4 uye T3 kuburikidza nekemisi inovhengana mumasimba akasiyana uye mafomati.
Heano maonero akawandisa eimwe neimwe Synthroid imwe nzira:
Levoxyl inogona kushandiswa kurapa hypothyroidism, yakawedzera gland gland, uye cancer yegomarara. Iyo inotsiva iyo hormone inowanzo kugadzirwa neako thyroid gland iyo inodzora metabolism uye simba.
Unithroid mumwe mushonga wehutachiona uyo unogona kushandiswa panzvimbo yeSynthroid kugadzirisa ako mahormone emahormone.
Tirosint ndiyo chete mishonga yehutachiona inouya mune gel capsule. Zvinogona kuve zvakanakira vanhu vane hypothyroidism vane chikafu kana zvinongedzo zvekushushikana, sezvo Tirosint isina shuga, dhayi, doro, gluten, lactose, kana chero zvimwe zvinowaniswa zvinoshandiswa kugadzira mapiritsi.
Tirosint-SOL mhinduro yemumuromo ine zvinhu zvitatu chete: levothyroxine, glycerol, nemvura. Kusiyana nemamwe mapiritsi kana macapsule, Tirosint-SOL imvura inouya ichidonha. Iyo haina doro uye inogamuchirwa kune varwere veese mazera.
Cytomel , Iyo inozivikanwawo se liothyronine sodium, Cytomel inogona kushandiswa kurapa zvakanyanya hypothyroidism. Iine liothyronine, inogadzira mahormone ehutachiona.
Natural zvakasarudzika thyroid (NDT) Inogadzirwa kubva kumatachiona ehuturu enguruve. NDT ine ese mana mahormone ehutachiona ayo anodiwa nemuviri wedu: T1, T2, T3, uye T4. Inogona kunge iri yakasarudzika nzira kune vanhu vachiri nezviratidzo zve hypothyroidism kana yakaderera T3 nhanho pavanotora mimwe mishonga yetachiona.
Shanda nemupi wako wezvehutano kuti uone kuti ndezvipi zvakakunakira iwe.
Chii chinonzi chepamusoro chinobviswa chirongwa chehutano?
Viibryd vs. Lexapro: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
ropa rinogwamba mukutanga kwepamuviri mavhiki mana
maitiro ekudzora prediabetes nekudya uye kurovedza muviri
chii kuverenga kweshuga muropa
unogona here kuwana monistat pamusoro pekambani
ndinofanira kutora rini b
Vanotengesa ma relaxer etsandanyama pamusoro pekaunda